Tag: varotra | Martech Zone
Alatsinainy, May 2, 2022 Talata, May 3, 2022 Douglas Karr
Ireo orinasa maniry hanatsara ny fahombiazan'ny varotra dia matetika mampiasa vola amin'ny paikady fampiharana ny sehatra fitantanana fifandraisana amin'ny mpanjifa (CRM). Niresaka momba ny antony ametrahan'ny orinasa CRM ny orinasa, ary matetika ny orinasa no manao ny dingana… fa matetika no tsy mahomby ny fiovana noho ny antony vitsivitsy: Data – Indraindray, ny orinasa dia misafidy fotsiny ny fanariana data ny kaontiny sy ny fifandraisany amin'ny sehatra CRM ary ny tsy madio ny data. Raha efa nampihatra CRM izy ireo,
Alatsinainy Martsa 21, 2022 Alatsinainy Martsa 21, 2022 Douglas Karr
Ny iray amin'ireo mpanjifanay dia ao amin'ny indostrian'ny fahasalamana ary nangataka anay hanara-maso ny fampiasana ny Salesforce ary hanome fiofanana sy fitantanana mba hahafahan'izy ireo mampitombo ny fiverenany amin'ny fampiasam-bola. Ny tombony iray amin'ny fampiasana sehatra toa an'i Salesforce dia ny fanohanany tsy mampino ny fampidirana antoko fahatelo sy ny fampidirana vokatra amin'ny alàlan'ny tsenan'ny fampiharana, AppExchange. Ny iray amin'ireo fiovana lehibe amin'ny fitondran-tena nitranga tamin'ny dian'ny mpividy an-tserasera dia ny fahafahana